Burcad badeed xeebaha Soomaaliya afduub ka gaysatay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Burcad badeed xeebaha Soomaaliya afduub ka gaysatay
Burcad badeed xeebaha Soomaaliya afduub ka gaysatay
Burcad-badeed la sheegay in ay yihiin kooxihii ka qaraabanayay biyaha Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay afduubteen markab shidaal siday .
Dhacdadan ayaa waxaa ay dhacday shalay gala boo asniin ahayd.
Saraakiisha Ciidanka Badda ee Midowga Yurub ee ka howlgalla ee xeebaha Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in kooxaha Burcadbadeeda uu gacantooda galay Markab siday Saliida.
Afhayeenka Ciidaka Badda ee Midowga Yurub ee ka howlgalla Soomaaliya Louise Tagg ayaa sheegay in Kooxaha Burcadeeda ay Afduubteen Markabkaasi oo ahaa mid ganacsi ,islamarkaana uu ka dulbabanaayay Calanka dowladda Srilaanka.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in ay wadaan Baaritaano kala duwan oo lagu doonaayo in lagu soo badbaadiyo dadkii iyo sidoo kale Hantidii Saarneyd Markabkaasi.
Waxaa uu xusay in Markabkaasi ay kooxaha Burcadbadeeda ay kasoo Afduubteen badweynta India.
Salaad Nuur oo ka mid ah Odayaasha dhaqanka degmada Caluula ayaa sheegay in Markabka ay soo Afduubteen Kalluumeysato iyo sidoo kale Kooxo horay uga tirsanaan jiray Burcadbadeeda.
Sidoo kale Salaad ayaa sheegay in ay Adag tahay in la ogaado waxaa uu Markabko siday Laakiin waxaa uu tilmaamay in qaarkood ay u sheegeen dadka degaanka in markabku uu siday Shidaal ,halka kuwo kalena ay sheegeen in uu waday Saliid.
Ilo-wareedyada ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay ku lug-leeyihiin howlgalka afduubka markabkan.
Warbixin kasoo Qaramada Midoobey Bishii November ayaa lagu sheegay in Saddex sano lagu guuleystay in aysan Afduub geysan Kooxaha Burcadbadeeda ,laakiin Howlgalkii La dagaalanka Burcadbadeeda oo Daciifay ay suurta gal tahay in ay dib u soo laabato Afduubkii Kooxaha Burcadbadeeda.
Hadii arrintan la xaqiijiyo waxay noqon doontaa dhacdadii u horraysay ee markab xamuul ganacsi ah ay ku af-duubtaan budhcad badeed Soomaali ahi tan iyo sannadkii 2012.
Guuto ka tirsan ciidamada badda ee Midowga Yururb ayaa BBC-da u sheegay “waxaanu dhacdadan ka war helnay shalay [isniintii] waxaana aroornimada hore saaka u dirnay diyaarado nooca yaryar ah si ay u soo baaraan”.
John Steed oo ka tirsan hay’adda Ocean Beyond Piracy, oo la hadlayey wakaaladda wararka ee Reuters ayaa yiri “shalay galabtii wuxu markabku sheegay in ay daba socdeen laba laash oo yaryari, ka dibna warkiisaba waa la waayey”.
Waxaa xusid mudan in Howl-gallada burcad badeedka ee afduubka maraakiibta ee xeebaha Somalia ayaa ahaayeen kuwa sii yaraaday saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Previous articleMas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo QM oo booqday xarunta Isku Xirka Gurmadka Abaaraha [Sawiro]
Next articleR/wasaaraha oo Dad weyne Badan la dukaday Salaad Roob Doon ah [Sawiro]